Ngalaba Gbanwere na Marketingtechblog.com | Martech Zone
Nke a nwere ike googlecideMa obu ngọngọ, anyị ga-ahụ. M dere ụnyaahụ na m ekwesighi iji aha m tinye aha m.
Agbanyeghị, ị ga-achọpụta bido taa na agbanweela m ngalaba saịtị ahụ dknewmedia.com gaa na chukwuebuka. Aga m ebugharị URL ahụ maka ọnwa 6 sochirinụ ruo mgbe okporo ụzọ na dknewmedia.com ga-apụ, mgbe ahụ, m ga-ezumike nka kpamkpam.
Aga m eme ka ị mara etu mgbanwe siri sie ike. Olileanya ihe niile na-aga nke ọma!
Cheta na: Nke a agaghị enwe mmetụta ọ bụla ma ọ bụrụ na ị debanyere aha gị site na email ma ọ bụ site na RSS.
Tags: domainngalaba mgbanwe
Jul 7, 2008 na 11: 31 AM
Doug! nnukwu blog aha na obi ụtọ na nkwaghari na-aga nke ọma!
Ezi echiche kacha mma si gafee ọdọ mmiri 🙂
Jul 7, 2008 na 12:26 PM
Ọ bụrụhaala na ị na-emegharị 301 gị nke ọma, echeghị m na ọ kwesịrị ịbụ nsogbu gbasara Google-icide. Ahụghị m ihe ọ bụla kpatara m ji laa ezumike nká DouglasKarr.com n'agbanyeghị. Ọ bụrụ na ị 301 redirect ihe niile na URL ya kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ ị ga-ejigide ihe ọ juiceụ linkụ njikọ maka ogologo oge njikọ na-abanye na DouglasKarr.com dị (nke nwere ike ịdị ruo mgbe ebighi ebi).
Jul 7, 2008 na 12:27 PM
O yiri ka ọ dị ezigbo mma, ejiri m n'aka na ọ ga-arụ ọrụ maka ya, Doug.
Ọzọkwa, echere m na Doug Karr nwere obi ụtọ. 🙂
Jul 7, 2008 na 12:32 PM
NA Ọ bụ ya mere m ji hụ Feedburner n'anya. Enweghị nsogbu mgbanwe maka ndị debanyere aha.
Jul 7, 2008 na 4:56 PM
Echere m na nke a bụ ihe amamihe dị na Doug. Aha ngalaba aha ọhụrụ ahụ dabara nke ọma na niche gị ezubere, yana dịka Willy kwuru n'elu, ọ bụrụhaala na ị nwetara nhazi 301 gị nke ọma, usoro njin ọchụchọ gị ekwesịghị ịta ahụhụ.
Jul 7, 2008 na 6:44 PM
Atụla ụdị mgbada a, Doug.
Will ga-eme nke ọma. 🙂
M pụtara, m ka na-agụ ya.
Jul 8, 2008 na 5: 53 AM
M kpaliri URL m na Jenụwarị ma chọpụta na ịgbanwe ndepụta dị ka ị mere bụ nnukwu enyemaka.
Agbanyeghị m kpebiri ịghara ịla ezumike nka ochie m. Enwere m ọtụtụ njikọ sitere na blọọgụ ndị ọzọ na weebụsaịtị na saịtị ochie, m ka na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ na-abata na ya. Imirikiti ndị folks tinyere m na blogroll nwere saịtị ochie. Fọdụ ndị ka na-eji ọkacha mmasị, ọ bụghị RSS. Ọtụtụ n'ime nsonaazụ google ka bụ saịtị ochie.
Ka o sina dị, ọ ga-adịrị gị mma na mgbanwe.
Enwere m olileanya na ị ga-eme ụfọdụ ederede na nke a.
Mgbe m zụtara aha ngalaba mbụ m, nzuzu m họọrọ nke nwere akara mgbochi na ya. Ọ bụghị nsogbu bụ isi, mana ihe m ga-agbanwe n'ikpeazụ.
M ga-enwe mmasị ịmata otú ọ ga-emetụta m SEO mgbalị na okporo ụzọ.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ide akụkọ gbasara etu i si nyefe ya, yabụ kedu ka ị siri kwalite nrụnye WordPress gị, otu esi eme emegharị ahụ, ndụmọdụ ndị ọzọ ị mụtara n'okporo ụzọ ahụ.